June 6, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
ကားေပၚက ဆင္းလိုက္ေတာ႕ ဆရာမ ရ႕ဲ ၿဖဴ၀င္းေနတဲ႕ ေၿခသလုံးေလးေတြ ကို ၿမင္လိုက္ရ သည္ . .။ ဆရာမ ၀ိုင္းစက္တ႕ဲ မ်က္၀န္းေတြ ..ႏွာတန္လွလွေလး . .ႏွဳတ္ခမ္းၿပဲၿပဲဖူးဖူးေလး..ေတြ ဟာ သူ႕ ရင္ကို တအားလွဳပ္ရွားယစ္မူးေစ သည္ လို႕ ဆရာ ဦးသိန္းထြန္းနိုင္ ထင္ သည္ . .။ ေဒၚခ်စ္ခ်စ္ေအးသည္ ေက်ာင္းဆရာမ မလုပ္ဘဲ ရုပ္ရွင္ မင္းသမီး လုပ္ဖို႕ေကာင္း သည္ လို႕ ဆရာဦးသိန္းထနြ ္းနိုင္ ထင္ Read more
က်မနာမည္က အိအိေအာင္ပါ.. အခု အသက္က ၂၅ႏွစ္..အရပ္၅ေပ၄လက္မနဲ႔ ဖြံ႕ထြားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္..စိုျပည္၀င္းဝါတဲ့ က်မရဲ႕အသားအရည္နဲ႔ လွပတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ ရုပ္ရည္ေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွာ ကြင္းမျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ နာမည္ႀကီးခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါ…က်မ ေက်ာင္းပီးေတာ့ က်မခ်စ္သူ ကိုမင္းထြန္း (က်မကေတာ့ ကိုလို႔ပဲေခၚတယ္) နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါတယ္… ကိုနဲ႔ က်မက ခ်စ္သူဘ၀မွာ အသန္႔ရွင္းဆံုး ေနခဲ့ၾကေတာ့ ဆက္စ္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိခဲ့ဘူး…ကို ကက်မထက္အသက္၂ႏွစ္ပိုႀကီးတယ္ က်မပထမႏွစ္မွာ သူကတတိယႏွစ္ေရာက္ေနပီေလ…သူေက်ာင္းပီးေတာ့ တာခ်ီလိတ္နဲ႔ ရန္ကုန္ကို ကုန္ကူးပီး က်မတို႔ မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ ေပါင္းဆံုဖို႔ စီးပြားေရးကို ေစာက္ခ်လုပ္ခဲ့တယ္…က်မတို႔ Read more
နေဆန်းနဲ့အတူတူ “ဖြေ” သီချင်း MVလေးကို အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ကာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ပိုပို
ပိုပိုကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေရာယူထားပြီး တေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ထွက်ရှိအောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုဟာ ယခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်အောင် ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်ဘဝနဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ပိုပိုက အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး မကြာသေးခင်က HOLIDAY ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုထွက်ရှိအောင်မြင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသီချင်းလေးကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း” ဖြေ” ဆိုတဲ့သီချင်းMV လေးကိုရိုက်ကူးနေပြီး ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ ပိုပိုနဲ့အတူ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေဆန်းက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ပိုပိုက “ဖြေ သီချင်း MV Shooting Coming Soon..#ဖြေ”ဆိုပြီး ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံရိပ်လေးတွေကို ချပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Read more
သီချင်းအသစ်တွေမထွက်ခင် သူမ လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူ
အေးမြဖြူကတော့ Myanmar Idol Season (4)ကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အနုပညာပါရမီပါလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြဖြူဟာ လက်ရှိမှာတော့ကပ်ရောဂါကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားရပြီး ယခုလိုရပ်နားထားရတဲ့အချိန်မှာတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် cover songလေးတွေကိုသီဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့Single song လေးတွေကိုလည်း မကြာခင်မှာထွက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သီချင်းအသစ်တွေမထွက်ခင် ယခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ ယခုလိုပဲပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ အေးမြဖြူက” မိုးအေးအေးနဲ့ အိမ်မှာနေရင်း စာဖတ်မယ် ဂစ်တာတီးမယ်..သီချင်းအသစ်တွေမထွက်ခင်တော့ ပုံလေးတွေပဲတင်ရတာပေါ့” Read more
သက်ကြီးပညာရှင်(၃၈)ဦးအား တဦးလျင်(၂)သိန်းကျပ်နဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားရောက်ကန်တော့မည့် မျိုးမင်းစိုး
မျိုးမင်းစိုးကတော့ ဒီဇိုင်နာလောကမှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အသလို အလှူအတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ရက်ရောလှသူတစ်ယောက်ပါ။ မကြာခဏဆိုသလိုလည်း အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး လက်ရှိမှာလည်း သက်ကြီးပညာရှင်(၃၈)ဦးအား တဦးလျင်ကန်တော့ငွေ(၂)သိန်းကိုပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မျိုးမင်းစိုးက ယခုလိုပဲပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ မျိုးမင်းစိုးကတော့ “သက်ကြီးပညာရှင်(၃၈)ဦးအားတဦးလျင်ကန်တော့ငွေ(၂)သိန်းပေးအပ်လှူဒါန်းပါမည်။စတုတ္တအကြိမ်မြောက် မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိမင်္ဂလာလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ကြသောသူများအားသက်ကြီးပွဲဇော်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပညာဂုဏ်ဖြင့်လေးစားတန်ဖိုးထားအပ်သော သင်ဆရာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းလမ်းကြောင်းဖောက်ပေးခဲ့သောမြင်ဆရာ သက်ကြီးပညာရှင်(၃၈)ဦးအား တစ်ဦးလျင်ကန်တော့ငွေ(၂သိန်း)ဆီဂါရဝတရားရှေ့ထားပြီးအိမ်တိုင်ရာရောက်ရိုသေစွာကန်တော့ငွေများ မနက်ဖန်မှာသွားရောက်ပို့သပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိမင်္ဂလာလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ကြသောသူများအားသက်ကြီးပွဲဇော်ပွဲ အဖွဲ့လေးမှာတော့ အဖွဲ့ဝင်(၁၇)ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားကြပြီး မျိုးမင်းစိုးက ဥက္ကဌ နေရာမှာတာဝန်ယူပြီးတက်နိုင်သလောက် ကိုယ်စွမ်းညဏ်စွမ်းရှိသလောက် ငွေအားလူအားအပြည့်နဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွတ်ခဲတာ(၄)နှစ်ရှိခဲ့ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကို Read more
နေတိုးကတော့ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ သူကတော့ ကျရာဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာကိုလိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ပန်းချီနဲ့အသံတုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တစ်ချို့ကတော့ သူကိုစွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့တောင် တင်စားထားကြပါသေးတယ်။ နေတိုးဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘာသာရေးကိုမမေ့လျော့ဘဲ အလှူအတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ရက်ရောလှသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်ပြီးတော့လည်း သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း နေထူးနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းသာယာပြီး အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ သစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာ ပခုက္ကူမြို့တွင်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အကယ်ဒမီများရှင်နေတိုးမှ အလှူငွေ(၄)သိန်း ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးရဲ့အလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ Source:Nay Htoo Read more
သူမဆိုတဲ့ ကရင်သီချင်းလေးကိုနားထောင်ချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကရင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို Cover song လေးဆိုပြခဲ့တဲ့ နော်စေးစေးထူး
နော်စေးစေးထူးကတော့ Myanmar Idol Season (4)ကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲပြီးကတည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာ ရပ်နားထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားရပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အာင် ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ Liveလွှင့်ပြီး စကားပြောလေ့ရှိပြီး Cover Song လေးတွေကိုလည်း သီဆိုပြလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကရင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို Cover Song လေး ပြန်လည်သီဆိုပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသီချင်း ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ “စေးကိုကရင်သီချင်းလေးဆိုတာ နားထောင်ချင်တယ်ပြော weweလေးတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ Read more
Gamerဖြစ်ချင်တဲ့ သမီးငယ်လေးအတွက် သမီးပုံလေးကိုသေချာအပ်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတာလေးနဲ့ မွေးနေ့အကြိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်တို့ဇနီးမောင်နှံ
ပရိသတ်ကြီးရေ ..စမိုင်းလ်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအနည်းအကျဉ်းသာ လုပ်နေပေမယ့် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကတော့ အခုချိန်ထိ အခိုင်အမာရှိနေဆဲပါပဲနော်။စမိုင်းလ်ကတော့ ဂရုစိုက်တတ်လွန်းတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူအပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားကျနေရသူဆိုလဲမမှားပါဘူးနော်။\_ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ စမိုင်းလ်တို့မိသားစုလေးကတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပံ့ပိုးနေပြီး အလှူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း မကြာခဏဆိုသလို လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ စမိုင်းလ်တို့ ဇနီးမောင်နှံက ချစ်ရတဲ့သမီးငယ်လေးအတွက် မွေးနေ့အကြိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ သမီးငယ်လေးနှစ်သက်မယ့်အရာလေး ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ကတော့ “ Gamer ဖြစ်ချင်တဲ့သမီးလေးအတွက်…သူ့အဖေကိုယ်တိုင်သမီးပုံလေးကိုသေချာအပ်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတာလေးနဲ့ သမီးလေးအတွက်မွေးနေ့အကြိုလက်ဆောင်”ဆိုပြီး သမီးငယ်လေးရဲ့ပုံလေးနဲ့အတူရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် မိဘနှစ်ပါးက ပေးတဲ့မွေးနေ့အကြိုလက်ဆောင်လေးကြောင့်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့သမီးငယ်လေးကလိုဝီရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….။ Source-Smile Zawgyi Gamerျဖစ္ခ်င္တဲ့ သမီးငယ္ေလးအတြက္ Read more
ချစ်သူဖြစ်သူက သူမအားလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပရိသတ်တွေအားပြောပြပြီး ရိုလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်
အိမ့်ချစ်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးချစ်ကောင်းကလည်း အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အိမ့်ချစ်ကလည်း အနုပညာမျိုးဆက်ကဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေရာယူထားပြီး တေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ထွက်ရှိအောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ့်ချစ်ကတော့ သူမရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မကြာသေးခင်ကမှာ ပရိသတ်တွေကိုချပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူဖြစ်သူက အိမ့်ချစ်ကို ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ချစ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီး သူမတို့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အနုပညာရှင်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကတောင် အားကျနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်သူက သူမအားလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အိမ့်ချစ်ကယခုလို့ပဲပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ “ကို Eric ရဲ့ စပရိုက်တိုက်ခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့် သူများဟာသူများဓာတ်ပုံရိုက်နေတာကိုနောက်ကနေအတင်းဝင်လာတာလို့ဆိုနေ ..!တစ်ပုံချင်းစီသာကြည့်ကြပါတော့”ဆိုပြီး သူမတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source:Eint Chit Zawgyi Read more
အနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏရပ်နားပြီး အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တော့မယ့် ဘေဘီမောင်
ဘေဘီမောင်ကတော့ sexy model တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ၊ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီမောင်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျတဲ့ ကောက်ကြောင်းပိုင်ရှင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပါတယ်။ သူမက ပရိသတ်တွေနဲ့အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအပေါ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိဘအပေါ်ကိုလည်းသိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဘေဘီမောင်က အနုပညာအလုပ်တွေသာမက အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘေဘီမောင်က စီးပွားရေးခြေချမှအနုပညာအလုပ်တွေကိုသေချာလုပ်တော့မယ်ဖြစ်ကြာင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ယခုလိုပဲပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ဘေဘီမောင်က “ခုနှစ်ရက်သားသမီးများရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှု့ကြောင့်မကြာခင်မှာစီပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေအကောင်ထည်ဖော်လို့ပြီးတော့မယ် ချစ်ခင်ပြီးအားပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အသက်၃၀မှာစီးပွားရေးလေးတစ်ခုလုပ်ချင်တာခုတော့ရခဲ့ပါပြီ စီးပွားရေးခြေချမှအနုပညာလေးကိုသေချာလုပ်တော့မယ်နော် ခဏလေးပါနော် အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့” ဆိုပြီး Read more